स्वास्थ्य बिमा नियमावली तयार
As of Fri, 19 Jul, 2019 23:10
स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्याबिनेटबाट यो महिनाभित्र स्वास्थ्य बिमा नियमावली पारित गराउने तयारी गरेको छ । नियमावलीमा सम्बद्ध विज्ञहरूको राय सुझाव लिएर स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आफ्नो तर्फबाट दिनुपर्ने सुझाव बुझाइसकेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम टुंगिन लागेको र यसलाई क्याबिनेटमा पठाउने तयारी गरिएको छ । बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. उमाशंकर प्रसादले स्वास्थ्य बिमाका लागि आवश्यक नियमावली मन्त्रालयले छिट्टै क्याबिनेटबाट पारित गराउने बताए । उनले भने, “नियमावलीका अभावमा गर्नुपर्ने कायमा बाधा भएको हुँदा यसका लागि मन्त्रालयले ध्यान दिइरहेको छ । हामीबाट सिफारिस गर्नुपर्ने विज्ञहरूको राय सुझाव मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं ।”
संविधानको भाग ३ मौलिक हक कर्तव्य अन्तर्गतको धारा ३५मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक कायम गरिएको छ । त्यसको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
सरकारले संविधानमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य सेवाको हक उपलब्ध गराउन यसअघि नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सरकार हेरफेरले गर्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गठन हुने स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन ।
बोर्डको अध्यक्षमा हालै डा. प्रसादलाई नियुक्ति गरिएको छ भने बोर्डका अन्य सदस्यहरूको पदपूर्ति गर्न बाँकी रहेको छ । यसका लागि स्वास्थ्य बिमा ऐन बनेपनि नियमावली बन्न बाँकी थियो । त्यो नियमावलीलाई यो महिनाभित्र ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी लागि परेको डा. प्रसादले जनाए ।